ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ အအေးမိဖျားနာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ | OnDoctor
ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ အအေးမိဖျားနာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
in အထွေထွေရောဂါများအကြောင်း, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ
ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ အပူချိန်ကျဆင်းလာသောကြောင့် ဗက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ ပိုမိုပေါက်ဖွားကူးစက်နိုင်ခြင်း၊ မိုးနှင့်ဆောင်းရာသီ တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကြောင့် (Seasonal Flu )အအေးမိဖျားနာ ဖြစ်တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်ခံအားနည်းသူများ၊ အသက်အရွယ်ကြီးသူများတွင် ပို၍ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကာလများတွင် ရောဂါပိုးမွှားကူးစက်လွယ်သည့် လူထူထပ်သောနေရာများကို တတ်နိုင်သ၍ ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
အပြင်ထွက်ဖို့လိုအပ်လာလျှင် နှာခေါင်းစည်း သေချာတပ်သင့်သည်။ လက်ကိုဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် သေချာဆေးကြောပေးသင့်သည်။ ဆပ်ပြာ​၊ ရေ အလွယ်တကူမရှိလျှင် လက်သန့်ဆေးရည်ဖြင့် မကြာခနဆေးကြောပေးသင့်သည်။ မိမိ၏ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ရမည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးမွှားကူးစက်ခြင်းမရှိအောင် မျက်နှာ၊ နှာခေါင်းတို့ကို လက်မဆေးဘဲ ထိကိုင်ခြင်းမပြုမိအောင် ဂရုပြုခြင်း၊ မိမိထိတွေ့ကိုင်တွယ်သည့် ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်များကို အရက်ပြန်ဖြင့် မကြာခဏဆေးကြောပေးရမည်။
ရာသီအကူးအပြောင်းတွင် အအေးမိဖျားနာမဖြစ်အောင် အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်အောင် စားသောက်နေထိုင်ပြီး၊ အအေးမိတုပ်ကွေးဖျားနာ ကူးစက်မခံရအောင် သတိပြုရပါမည်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။အစားအစာတွေမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်များသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းမွန်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် အစွမ်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရာသီအကူးအပြောင်းတွင် ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝသည့် အသားနှင့်ငါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အသီးအရွက်စသည့် အစားအသောက်အုပ်စုအားလုံး စုံလင်စွာ စားသုံးပေးရပါမည်။
ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝသည့် သံပရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ခရမ်းချဥ်သီး၊ ကျွဲကောသီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ဗီတာမင်ဒီကြွယ်ဝသည့် ငါးကြီးဆီ၊ အုတ်ဂျုံ အစေ့အဆန်များ၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အဆီများသောငါး၊ တူနာငါး၊ ငါးသေတ္တာငါး၊ ဝက်သား၊ ကြက်သား၊ Vitamin A ကြွယ်ဝသည့် အစိမ်းရောင်အဝါရောင်ရှိသော အရွက်၊အသီးတွေ လုံလောက်အောင် စားရပါမည်ယ်။ ဇင့်၊ ဆီလီနီယမ်၊ ဖောလစ်အက်ဆစ် Zinc, Selenium, Folic Acid ပါဝင်သော အသား၊ အစေ့အဆန်၊ ချောကလက်၊ ကြက်သား၊ အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ကညွတ် ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဥအမျိုးမျိုးကို နေ့စဉ်အစားအစာများတွင် ထည့်စားရပါမည်။ လိုအပ်ပါက ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်ဆေးများ သောက်သုံးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးလိပ်၊ ဘီယာ၊ အရက် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ ကိုယ်ခံစွမ်းအားလျော့နည်းစေနိုင်သည့်အတွက် မသောက်သုံးသင့်ပါ။ ရေနွေး၊ စွပ်ပြုတ်ပူနွေးနွေး၊ ချင်းပြုတ်ရည်နွေးနွေး စသည့်လည်ချောင်းခြောက်သွေ့မှု သက်သာစေသော အရည်များကို ပိုသောက်ပေးသင့်သည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းက ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ကောင်းမွန်စေသည်။ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းက ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးတွင် အအေးမိတုပ်ကွေးဖျားနာဖြစ်ခဲ့လျှင် အခြားအိမ်သားများ မကူးစက်စေရန် သီးသန့်ခွဲထားပြီး ပြုစုပေးပါ။
အအေးမိတုပ်ကွေးဖျားနာခြင်းသည် တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုး Influenza Type A & B ကြောင့်ဖြစ်သဖြင့် ရာသီတုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးကို တမိသားစုလုံးထိုးပေးခြင်းဖြင့် မိမိဆီမှ မိသားစုဝင်များနှင့် အခြားထိစပ်သူများကို တုပ်ကွေးမကူးအောင် အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကူးစက်ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ကိုဗစ်ကဲ့သို့ တုပ်ကွေးပိုးများသည်လည်း အအေးမိဖျားနာသည့် လက္ခဏာများ ပြတတ်သဖြင့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်း ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ထိုးသင့်ပါသည်။ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးရာတွင် တုပ်ကွေးရာသီမရောက်ခင်အနည်းဆုံး တစ်လခန့်ကြိုတင်ထိုးနှံပေးခြင်း၊ အသွင်ပြောင်း တုပ်ကွေးပိုးအသစ်များ ကာကွယ်နိုင်ရန် နှစ်စဉ်ပုံမှန်ထိုးပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပြီး ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ အအေးမိဖျားနာ ကင်းဝေးအောင် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
Author: Dr. Ye Mon
ဆေးသောက်စရာမလိုဘဲ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်စေသော အရေပြားပြဿနာများ
မကြာခဏ လေတက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အမျှင်ဓာတ်က ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ
Diet မလုပ်ဘဲဝိတ်ကျစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
အမျိုးသားတွေ အိမ်ထောင်ရေးသုခမပြည့်ဝရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
ပွေး၊ ညှင်းနဲ့ ယားနာတွေ အမှန်တကယ်ပျောက်ဖို့ဆိုရင်
ကြို့ ထိုးတာ မြန်မြန်ပျောက်အောင်
အမျိုးသားများ နဲ့ ကြီး ကြာ ရှည်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ကယ်လ်စီယမ် ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ
Get Our App for Your Healthcare Partner
Linking & Reprinting Policy
OnDoctor Company Limited © 2020. All Rights Reserved.
© 2020 OnDoctor Company Limited - All Rights Reserved.